Inyanga. 7 ukufundwa malunga neminyaka engama-50 emva kokuba oyisile. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | into engeyonyani yebuchwepheshe, IiComics, Uvavanyo, I fantasy, Iincwadi
Ziyazaliseka namhlanje Iminyaka engama-50 okoko kwafika umntu eNyangeni. Kodwa khange siyinyathele kwakhona. Eyona ilungileyo. Kusekhona apho kuzolile, kusikhanyisela ngobungangamsha bokujikeleza kwayo ngokupheleleyo xa kuyichukumisa. Kwaye ukuguqula iilwandle kunye nemimoya ethambekele kuyo, njengathi thina sizalwe sinegeza kule nyanga apho bekukho khona ukusithwa kwelanga kabini kunye naye njengomntu ophambili. Zezi Kufundwe isi-7 esikhethiweyo ukubuyela apho, nokuba ikukucinga.
1 Ukusuka eMhlabeni uye eNyangeni-Jules Verne
2 Inyanga- u-Ian McDonald
4 Inyanga-uHana Pang kunye noThomas Hegbrook
5 Imichilo - Andrew Smith
6 Ulwaphulo-mthetho lweNyanga epheleleyo-eKit Whitfield
7 IiAdventures zikaTintin. Injongo: Inyanga kunye nokufika enyangeni-Hergé
Ukusuka eMhlabeni ukuya enyangeni -UJulio Verne
Ungaqali njani nge zakudala zakudala. Umbonisi uJules Verne wapapasha le noveli ngo 1865. Kwaye kwaba njalo mpu melelo ongazange athandabuze ukuqhubeka nayo Malunga nenyanga, kwiminyaka emihlanu kamva.
Ukusuka eMhlabeni ukuya enyangeni ichaza amalungiselelo zokuhamba emajukujukwini, kunye Malunga nenyanga ubalisa zokuhamba. Zombini zilandela iipateni ze Ukusasazwa kwezenzululwazi, ikhoyo ngoku emsebenzini kaVerne, kodwa ikwabalulekile kwi ubumnandi babalinganiswa bayo kunye nokubamba kwayo uburharha.
luna -UIan McDonald
UMcDonald ngumbhali wasentsomini waseWales kunye nombhali wamaphupha kunye namabhaso anje nge UHugo okanye uArthur C. Clarke. Ngaba Inyanga entsha sisihloko sokuqala se trilogy uhlobo Umdlalo wetrone ngamadabi namayelenqe phakathi kweentsapho ezinkulu ezijongene. Uluntu luseke i ikholoni enyangeni kwaye kufuneka iququzelele uluntu, kunye namasiko alo, iingxaki zalo kunye neengcinga zeentsapho ezifuna ukulawula i-satellite.
Apollo 11 -U-Eduardo García Llama
UGarcia Llama ngu Injineli yeNASA eHouston kwaye usixelele Uhambo luka-Apollo 11 ukusungulwa ukubuyela eMhlabeni. Iya ngendlela yenoveli apho abo baphambili bethetha khona (ixhomekeke kwimibhalo esemthethweni yenqwelomoya). Iindinyana zayo zinxibelelana ne biography Oosomajukujuku, ii-anecdotes y amava Ngexesha lokuhamba ngenqwelomoya kunye nezinye iinkcukacha zolu thumo lwembali.
Inyanga -UHannah Pang kunye noThomas Hegbrook
Este incwadi enolwazi Ecacisa imbali kunye nenyani malunga neNyanga, ikunike Ukuthinta umlingo ukuba ubuntu umnike ixesha. Umthombo wokhuthazo kubo bonke, esi sihloko sizama ukucacisa ukuba kutheni iNyanga iqhubeka nokuvelisa Umtsalane kakhulu kunye nefantasy.
Imilenze -Andrew Smith
Ngombuzo we ungaya phi xa sele uye enyangeni, UAndrew Smith uthetha kwi oosomajukujuku basaphila abanyathele inyanga. Kwaye uyenzela ukufumanisa ukuba batshintshe njani ubomi babo ukubuya kwakhe.
Iziphumo ziyincwadi ene ubungqina kwabo baphandi abathi, ngandlela thile, bachukunyiswa yamava. Umzekelo, enye ihlala ipeyinta umfanekiso ofanayo, enye ibhala iingoma ngokufika kwakhe enyangeni, uninzi lusele, abanye abafuni kwazi malunga nehlabathi kwaye abanye banesifo sengqondo.
Ulwaphulo-mthetho lwenyanga epheleleyo -Kit Whitfield
Okunye inoveli yefantasy ngamayelenqe obugebenga nabanye abalinganiswa bentsomi abachaphazelekayo xa bebandezeleka kwimpembelelo yeNyanga: UWolfman. Sihlala kuluntu apho indawo enkulu yabemi yenziwe ngama-waswolves. Pha ULola unakho, igqwetha lezinto ezingathandekiyo, kodwa eziyimfuneko, inkonzo karhulumente elawula i-lycanthropy, kuya kufuneka isombulule Ukubulala amaqabane akhe amabini. Kwangelo xesha, uzama ukubulungisa ubomi bakhe bodwa obunomkhethe nocalucalulo.
IiAdventures zikaTintin. Ithagethi: iNyanga y Ukufika eNyangeni - UHergé
Kwaye siyavala nge enye incwadi yamahlaya ngeli xesha. Zonke izigqubuthelo zeTintin zaziwa ngaphezu koku, kodwa ezi zezi zinto ngokuqinisekileyo zezona zibalulekileyo kwaye ziyakhunjulwa, ngakumbi kwirokethi.
Akunakwenzeka ukuba intatheli eyaziwayo kakhulu kwihlabathi ayizange inyathele iNyanga. Ngokunjalo ke wayelindele uloyiso lwasebukhosini Kwii-vignettes zezi imiqulu emibini ukuba uHergé wapapashwa ngo 1950 kunye ne1954 ngokulandelelana. Ukongeza, uHergé ucebise ukuba ubukho bamanzi enyangeni, inyani evavanywe kutsha nje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » into engeyonyani yebuchwepheshe » Inyanga. Ukufundwa okungama-7 malunga neminyaka engama-50 emva kokuba oyisile.
E-Tintin uqikelela ubukho bamanzi, inyani eqinisekisiweyo ngo-2000 ngenqanawa uClementina, uVerne ubalisa ibali apho yonke into ilindelwe ngokuchaneka okungachazwanga, incwadi yamadoda ka-HG Wells enyangeni ibilahlekile, phakathi kwezinye iincwadi.